Ny Atsimon’ny Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Ny Atsimon'ny Atsimo
Voadika ny 05 Jona 2019 8:51 GMT
Merida, Mexico – nanjohy ny Rising Voices tamin'ny 2013
Ny Santiaguero Collective dia nanomboka tao an-tanànan'i Mérida, Meksika, toerana nifamorian-dry zareo noho ny fitiavana mozika niraisany, saingy tsy izay rehetra atao ho mozika akory. Ny mampiavaka ity fikambanana ity dia ny fifantohan-dry zareo amin'ny mozika ampiasàna ny lisansa Creative Commons izay mampiseho taratra ireo olana sosialy ankehitriny ao amin'ny faritra sy ny firenena .
Rehefa nandeha ny fotoana, maro ireo tarka mpiangaly mozika no tonga nanatevina laharana ilay fikambanana, indrindra fa ireo tarika avy ao an-toerana mandrakitra ny mozika amin'ny tenin-dry zareo Maya. Vetivety dia tsikaritra fa nisy filàna manome sehatra mnba hahamora ny fifampiresahana momba ny ilàna manangana sy manohana ny tanora mpitarika mangetaheta ny hahita ny tenindrazan-dry zare ho taratra ety anaty aterineto sy ny fifandraisan-dry zareo amin'ireo tanora izay mety hanana fàka any anatin'ireny vondrom-piarahamonina indizeny ireny. Ilay tetikasa “Atsimon'ny Atsimo” dia mitondra miaraka ireo mozisiana avy eo an-toerana hitrandraka ireny vondrom-piarahamonina ireny amin'ny alàlan'ny fifampiresahana ety anaty aterineto, isan'izany ny habaka iray hifampizaràna ny tsanganasan-dry zareo amin'ny resaka mozika.
Nasaina ireo mpankanto tao an-toerana mba hamerina handray feo sy hampifanaraka amin'ireo feonkira noforonina tamin'ny alàlan'ny fiarahamiasa. Napetrak ho azo raisina mifanaraka amin'ny lisansa Creative Commons daholo ireo feonkira sy fampifanarahana ireo. Ny sasany tamin'ireo fiarahamiasa dia ahitàna ity feonkira ity narafitra hifanaraka amin'ny feonkiran’ilay Mayana mpiangaly Rap PatBoy:
sy ireo mpanakanto ao an-toerana mpiangaly hip-hop Mayaclan, izay nandrafitra ity feonkira ity:
Bilaogy: El Sur del Sur
SoundCloud: Colectivo Santiaguero
Facebook: Colectivo Santiaguero